Mari-nehupfumi, 27 Chikunguru 2016
Chitatu 27 Chikunguru 2016
Chikunguru 27, 2016
Zvizvarwa ZveZimbabwe Zviri MuNew York Zvoronga Machikichori
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muNew York zvirikutarisirwa kusangana muguta iri apo pachaitwa mabiko nemitambo yakasiyana siyana zvekucherechedza tsika nemagariro ekumusha.
Chikunguru 26, 2016
Kushaikwa kweMari Kwoderedza Kutengwa kweMabhuku muNyika
Munyori ane mukurumbira VaStephen Chifunyise, avo vanga vari pamusangano uyu, vanoti mabhuku akanyorwa nerurimi rwaAmai anoita kuti vana vakwanise kunzwisisa kudarika akanyorwa neChirungu.
Chikunguru 25, 2016
Madzimai Opengera Chipatara Chavo kuMasvingo
Madzimai anosunungukira vana pachipatara chikuru cheMasvingo General ari kugunun’una nekurambidzwa kubuda muchipatara uye kunyimwa tsamba dzekuratidza kuti vana vakaberekerwa pachipatara ichi.
Mufaro muHighlanders Zvichitevera Kutora Kwayo Mukombe
Highlanders iri kupemberera kutora mukombe weZimbabwe National Army Charities Shield panguva iyo chikwata chemaSables chakarakashwa ndokubuda mumukombe weAfrica Cup.
Mutongo Unotsigira ZBC Wotambirwa Nemaonero Akasiyanasiyana
Asi mutongo uyu waunza mutauro wakanyanya munyika vamwe vachiutambira asi vamwe vachiti hurumende iyo iri kutatarika kuwana mari kana yekutambirisa vashandi vayo, yave kutsvaga uta nemugate.
Chikunguru 22, 2016
VaMasiyiwa Vopihwa Chiremera Chekuchingamidza VaObama
Shoroma ine mukururumbira munyika ari muridzi wekambani yembozhanhare yeEconet-Zimbabwe vastrive masiyiwa nemusi wechitatu vainge vari pamusangano wakakosha kumuzinda wemutungamiri wenyika yeamerica wewhitehousemuWashington DC.
Chikunguru 21, 2016
Hurumende Inozivisa Vashandi Vayo Mazuva eMihoro yaChikunguru
Gurukota rezvemabasa nevashandi Amai Priscah Mupfumira vanonzi vazivisa mazuva anofungidzirwa kuti hurumende ingangobhadhara vashandi vayo mihoro yaChikunguru.
Chikunguru 19, 2016
Zimbabwe Yoshorwa neKuda kuBhadhara IMF Ichitadza kuBhadhara Vashandi
Zvinhu munyaya dzezvehupfumi munyika hazvina kumira zvakanaka zvopa vamwe kuti vayambire kuti nyika inogona kuguma yaenda kumazivandadzoka zvakaitika kuZaire pasi pehutongo hwaMobuto Sese Seko zvakapa kuti nyika iite donga Watonga muzinda wenyuchi.
Chikunguru 14, 2016
Hurumende Yokundikana Kupa Varimi Zvibatiso
Hurumende yotadza kupa varimi magwaro echibatiso kana kuti ma 99 year leases.
Chikunguru 12, 2016
Kusamira Zvakanaka kweZvinhu muNika Kwovharisa Makambani
Izvi zvakaburitswa mugwaro rebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe rinoongorora mashandiro emakambani richitarisa mwedzi mitatu yekutanga kwegore.
Chikunguru 05, 2016
VanaChiremba, Vana Mukoti neVarairidzi Voenderera Mberi neKuratidzira
Sangano re Zimbabwe Nurses Association rinoti vana mukoti vazhinji varikutadza kuenda kumabasa nenyaya yekushaya mari yekufambisa nezvimwewo zvichitevera kusabhadharwa kwavo mari dzemihoro dzemwedzi wapera nehurumende.